I-Shea butter hydrate, ithambisa, ivikela futhi ihlobise isikhumba sakho nezinwele zakho - i-Afrikhepri Fondation
I-Shea umswakama, ithambisa, ivikele futhi ihlobise isikhumba sakho nezinwele zakho
Li-shea nut isetshenziswe ezingxenyeni eziningi ze-Afrika izinkulungwane zeminyaka. Kuthiwa iNdlovukazi uNefertiti yayikweleta ubuhle bayo obukhulu ngokusebenzisa ibhotela le-shea ngoba indawo enamafutha ekhishwe kumantongomane iqukethe ubuhle obungajwayelekile besikhumba. I-Shea inezici zangempela zesikhumba: iyasithambisa, ithambe, ivikele futhi ihlobise ukubonga ngokuqanjwa kwayo okunothe ngokukhethekile kokungaqondakali, amavithamini (A, D, E, F) ne-latex. Indlela yokukhipha ibhotela yobuciko esetshenziswa abesifazane baseSiby iholela kumkhiqizo omsulwa nowemvelo, njengoba igcine zonke izithako zayo ezisebenzayo. Kunoma ikuphi, ncibilikisa ibhotela entendeni yesandla sakho ngaphambi kokufaka isicelo. Ibhotela kufanele libe uketshezi ngokuphelele.
I-Moisturizer yezendlalelo zobuso obusezingeni eliphezulu
Ubuso bungumhlomuli omkhulu ekusetshenzisweni kwansuku zonke kwebhotela le-shea. Naka kakhulu izindawo ezingenamanzi (izisekelo zekhala, amakhona wezindebe). Massage imizuzu eyishumi. Inkinga yesikhumba sobuso iphindwe kathathu:
Ukuqina: wukunotha kwes shea ezintweni ezingenakuqondeka nakumavithamini F azosebenza. Ngokuthinta isikhumba sakho ngemuva kokubhucungwa, ungawuzwa umehluko.
hydration: izingqimba ezingaphezulu zidinga i-hydration eyengeziwe. Uzoyizwa ekubukeni kwesikhumba sakho ekugcineni kwesicelo.
Ukuvikelwa: ibhotela kufanele lingene ngokuphelele futhi kufanele ubone i-satin kuphela. Kepha ukuvikelwa kungokoqobo futhi kuzoqhubeka isikhathi eside kakhulu. Izindebe zimunca ngokushesha okukhulu futhi esikhathini esomile, kuzodingeka ukuthi uzigcobe njalo nge-shea okuyisihlakala esihle sezindebe.
I-Shea inikeza ukuvikelwa okuphawulekayo kwe-hypodermic ngenxa yezakhiwo zayo ezinomsoco ngenkathi izici zayo zokulwa ne-elastase zihlinzeka ngokuvikelwa kokuzivikela ngokumelene namanothi e-stretch.
Ukulungiswa okusheshayo: i-spoon ekugezeni okushisayo, ungqimba olungabonakali olungabonakali luzohlala kuwo wonke umzimba. Isixazululo sokuphumula: ukugeza izandla zakho namathanga kahle. Umzwelo wenhlalakahle yemisipha iyashesha.
I-ejenti yokuvikela izinwele enamandla: ukuguquguquka nobungqabavu
Ukuvuselela uhlelo lokusebenza. Izindlela zokwelashwa ezihamba phambili: ngosuku olwandulela ukugeza izinwele, gqoka izinwele zakho ngokuzihlikihla ngemikhawulo ngefindo elikhulu lebhotela. Goqa izinwele ngethawula elishisayo. I-keratin yakho izomunca konke ekudingayo.
Shampoo. Imizuzu eyishumi ngemuva kwe-shampoo, kuzinwele ezomile, i-walnut encane ukunikeza ukukhanya nokuphila.
Kubalulekile emzimbeni wakho, umzimba wengane
Isiko lase-Afrika lenza shea ukuxhumana okuyilungelo phakathi kukamama nengane ngokugcotshwa nsuku zonke. Kuyindlela evikela kakhulu yokulwa nokucasulwa njalo.
U-Shea uzuzisa ikakhulukazi umsubathi. Ukubhucunga imisipha ngaphambi nangemva kokuzivocavoca kuyinikeza ukuguquguquka futhi kuvumela ukululama okungcono. Ukusetshenziswa kwayo kwamakhulu eminyaka e-Afrika ukunakekelwa kwemisipha kukwenze kwaba ngumkhiqizo oyisisekelo oqinisekisiwe womsubathi ophezulu.
Ngaphambi kokuqeqeshwa ngokomzimba: Sheshisa ukuqala nokufudumala.
Ngemuva kokuqeqeshwa ngokomzimba: Ukululama ngokushesha kanye nokuhambisa amanzi okuthuthukile nokususwa kwama-toxin avela emisipheni elimele.
ukulimala shea ecocekile
Siyabonga yokubakhona ngamavithamini A, shea kusiza ukuphulukisa kanye magciwane ukulwa dermatitis, isikhumba chapped, ukusha kanye nezilonda isikhumba noma ematsheni.
IShea futhi iyisivikelo esihle kakhulu sesikhumba esimweni sezulu esibi nelanga. Kuyisivikelo semvelaphi yemvelo emisebeni ye-ultraviolet esiza ukuvimbela ukungezwani okuthile nelanga, impahla ngenxa yobukhona be-latex.
Engeza i-spoon ebhodini lakho lokushisa futhi ungqimba olungabonakali olungabonakali luzohlala kuwo wonke umzimba. Hamba izandla zakho namathanga kahle. Umzwelo wenhlalakahle yemisipha iyashesha.
I-Raw Organic Shea Butter - I-Certific Organic Agriculture (AB) ne-ECOCERT - 250ml
Thenga i- € 24,23
UMNIKELO WESINGENISO I-Raw Organic Shea Butter 200ml - Ukusetshenziswa okuningi: I-Cream Moisturizing ...
Thenga i- € 14,99
I-Shea Butter 400 g - I-Organic - 100% intombi - 100% yemifino - akukho izithasiselo - Ezingachazwanga
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 11,90
Thenga i- € 12,90
I-Cattier Organic shea butter - Imbiza engu-100g
Okusha okungu-20 kusuka ku- € 7,19
Thenga i- € 7,19
I-Shea Butter 800 g - I-Organic - 100% intombi - 100% yemifino - akukho izithasiselo - Ezingachazwanga
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 17,90
Thenga i- € 17,90
I-African Shea Butter 500g - Ehlanjululwe - IGhana - 100% Emsulwa Nemvelo - Ibhotela Le-Shea Elifanelekayo ...
Thenga i- € 18,99
Ukuzalwa kwe-Shea Butter Refined (n ° 305) - 1kg - 100% yemvelo
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 17,99
I-NaturaForte Shea Butter 250g - emsulwa neyendalo, icindezelwe amakhaza futhi ayichazwanga, ibhotela le-shea ...
Kugcine ukubuyekezwa ngoMashi 7, 2021 12:36 PM
I-Ethiopia: Izwe Lesithembiso Lama-Rastas Okugcina - I-Documentary (2019)